Football Khabar » मोउरिन्हो टोटनह्यामको नयाँ प्रशिक्षकमा नियुक्त : पार लाउलान् त ?
मोउरिन्हो टोटनह्यामको नयाँ प्रशिक्षकमा नियुक्त : पार लाउलान् त ?
इंग्लिस क्लब टोटनह्यामले पोर्चुगिज म्यानेजर जोसे मोउरिन्होलाई नयाँ प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको छ । क्लबले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मोउरिन्होलाई सन् २०२३ सम्मका लागि प्रमुख प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको जनाएको छ ।
क्लबले अघिल्लो दिन मात्रै अर्जेन्टिनी म्यानेजर मोउरिसयो पोचेटिनोलाई पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । त्यसको २४ घन्टा नबित्दै क्लबले मोउरिन्होलाई नियुक्त गरेको हो ।
कडा स्वभावका कारण फुटबलमा प्रायः चर्चा र आलोचनामा रहने मोउरिन्होले अब टोटनह्यामलाई नेतृत्व गर्नेछन् । उनी यसअघि म्यानचेस्टर युनाइटेडमा प्रशिक्षक थिए । तर, करिब ११ महिना उनी क्लबविहीन रहे । त्यसअघि उनले स्पेनसि रियल मड्रिड, इटालियन इन्टर मिलान, चेल्सीलगायत ठूला क्लब सम्हालिसकेका छन् । युनाइटेडले उनलाई गत डिसेबरमा पदबाट बर्खास्त गरेको थियो ।
टोटनह्याम गत सिजन च्याम्पियन्स लिगको फाइनल पुगे पछि फाइनलमा लिभरपुलसँग २–० ले हारेको थियो । जारी सिजन प्रिमियर लिगमा १२ खेलपछि १४ अंक बनाएर टोटनह्याम १४औं स्थानमा छ । यो सिजन टोटनह्यामले १२ खेल सकिँदा मात्रै ३ खेल जितेर ५ खेल बराबरी गरेको छ भने ४ खेल हारेको छ । यता, च्याम्पियन्स लिगमा टोटनह्यामले ४ खेल सकिँदा २ खेल जितेर एक खेल बराबरी गरेको छ भने एक खेल हारेको छ । टोटनह्याम अब एक जित भए अन्तिम १६ मा जानेछ ।
प्रकाशित मिति ४ मंसिर २०७६, बुधबार १३:१३